Vezvinomera Imbwa Kudya - Uri Kubheja Kwavo Kana Kwete? | Bezzia
Kudya kwezvirimwa kune imbwa, hongu kana kwete?
La Kudya kwemidziyo kune imbwa iriwo pamuromo wevanhu vese. Nekuti isu tinonyatsofunga kuti kana zvakatinakira, pamwe zvakanakira zvipfuyo zveduwo. Asi chirevo icho hachisi kuzogara chichivimbika. Nekuti munhu wese ane yakaoma yekugaya system uye kwete tese tinonzwa chikafu chakaenzana zvakaenzana.
Zvakanaka nhasi tichaona izvo nyanzvi dzinowanzo taura nezvazvo kana zvasvika kune urwu rudzi rwekudya. Sezvo ichokwadi kuti pamwe hapana chakanakisa modhi muchimiro chekudya, asi zviripo kudyiswa kwemhuka dzedu kunofanirwa kuve kwakaringana uye kuti inovapa mavitamini uye zvinovaka muviri zvavanoda.
1 Imbwa inogona kuve vegan?
2 Chikafu chakanyanya kusikwa chembwa
3 Dzimwe nguva mabikirwo ezvirimwa
4 Kudya pasina mapuroteni emhuka?
Imbwa inogona kuve vegan?
Kunyangwe iwo mubvunzo ungakushamise iwe, ichokwadi kuti vanhu vazhinji vakaubvunza uye vanoramba vachitaura pamusoro peizvi. Sezvatinoziva chaizvo, chikafu chevegan chinosanganisira michero, miriwo asiwo mabota kana zviyo zvakakwana, pakati pezvimwe zvekudya. Asi kana tichifunga nezvemhuka dzedu, ichokwadi kuti hatigone kuramba hunhu hwadzo. Kupfuura chero chinhu nekuti muviri wake waisazobvuma zvizere. Sezvo iwe waisazoshandisirwa kugona kunyatsogadzirisa zvese zvinovaka muviri. Saka mukufamba kwenguva inogona kunge iri dambudziko rehutano kwavari. Nekudaro, chikafu chevegan zvachose, hachizove chakanyanya kuita. Asi hongu, isu tinofanira kugara tichitsvaga kuna vet, ndiani anogona kujekesa nyaya zvakanyanya zvichienderana neumwe neumwe.
Chikafu chakanyanya kusikwa chembwa
Ichokwadi, sezvatazivisa kuti nyanzvi hadzigoni kubvumirana zvizere. Asi Ehe, ivo vanowanzo tarisa kuti chikafu chemidziyo kune imbwa hachisi chakanyanya kukodzera. Kunyangwe paine paine mamwe maitiro. Sezvo tichifanira kunzwisisa kuti mhuka dzedu dzinofanirwa kusangana nezvinodiwa zvehutano, sezvazvinoitika nevanhu. Kune rimwe divi, calcium yakakosha zvakanyanya, pamwe ne vhitamini D, pakati pevamwe. Vazhinji chikafu kana ndiro dzakagadzirirwa ivo vatove nezvose izvi uye nezvimwe, kubva pane yemaficha maonero. Saka hazvina kunyanya kuoma kuwana chikafu chine hutano pamusika. Naizvozvo, isu tinogona nguva dzose kuchichinjisa nechikafu chavo chakakosha.
Dzimwe nguva mabikirwo ezvirimwa
Dzidziso yacho yakajeka kwatiri uye ndeyekuti, isu tinofanirwa kutsvaga chiyero chakaringana kuitira kuti zvipfuwo zvedu zvisashaye chero chinhu. Ivo vanofanirwa kusangana nezvido zvinovaka muviri uye zvakare, uchitendera kuti utakurwe nehunhu hwako. Saka kune izvi, hazvikuvadze kusanganisa zvese kudya kana mararamiro. Saka zvinokwanisika kuti nguva nenguva tinogona kukupa chikafu chemuriwo asi tichigara tichisanganisa neyakajairika yako. Kunyangwe ivo vachidya nyama, zvine musoro zvakare kuti isu tinochinjanisa nechero mhando yemuriwo. Saka isu tinoziva kuti chikafu chine hutano chinokubatsira zvakanyanya mazuva ese, pasina kusiya kumashure kweprotein ayo akakoshawo kwavari.
Kudya pasina mapuroteni emhuka?
Chokwadi ndechekuti zvinoita sekunge pano pane vakawanda vanobvuma izvozvo hatina kukwanisa kubvisira mhuka dzedu pasina mapuroteni. Nekuti iyo yakakwana kune iyo metabolism uye zvakare inowedzera pfungwa dzako. Saka hwaro hwayo huchagara huchifanira. Kana tikazvibvisa, saka tichafanirwa kuvapa chimwe chinhu kugadzirisa kushomeka kwezvose zvinoitwa nenyama mumuviri wavo. Kunyangwe chiri chokwadi kuti kana tikafunga nezvazvo, taizorega kupa chikafu chechisikigo kuti chitsiva nechimwe chaizove chemakemikari chaiwo. Uri wako kana kupesana nevezvinodyiwa kudya imbwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Mascotas » Kudya kwezvirimwa kune imbwa, hongu kana kwete?
Tsvaga iyo yematsutso-zhizha '21 muunganidzwa weNice Zvinhu
Sun cream usati kana mushure mekunyorovesa